Ny asa lavorary nataon’ny Tompo
"Izy (Jesosy Kristy) nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambonin’ny hazo (hazofijaliana)." 1 Petera 2:24
Faly sy resy lahatra ny mpino tsirairay, afaka miteny hoe: Jesosy Kristy mihitsy no nitondra ny fahotako teo amin’ny hazofijaliana. Harena tsy hay lazaina no raketin’ireo teny vitsivitsy ireo!
Izy mihitsy no nanatanteraka ny asam-panavotana. Nozakainy ny fanamelohan’Ilay Andriamanitra marina sy masina, fanamelohana sahaza ireo fahadisoantsika. Na anjely, na olona, dia tsy nisy afaka nanatanteraka izany asa izany, fa Ilay Zanak’Andriamanitra tonga olombelona ihany.
Izy nitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazofijaliana. Tsy maty ho ana fotokevitra na foto-pampianarana iray tsy akory ny Tompo Jesosy. Tsia, fa nanolotra ny ainy ho antsika Izy. Izay zava-dratsy natao, izay eritreri-dratsy nananana, izay teny masiaka na tsy mendrika nolazaina, ireny rehetra ireny dia nitambesatra tamin’Ilay Zanak’Andriamanitra nisolo toerana antsika : noraisiny ho toy ny Azy ireo fahadisoantsika, ireo helotsika sy ny vokatr’izany eo anatrehan’Andriamanitra. Nentiny tamin’ny tenany izany. Olona Izy, ary noho izany ihany no nahafahany nijaly sy maty ho ana olona. Nataon’Andriamanitra nihatra taminy ny famaizana sahaza antsika, toy ny hoe Izy mihitsy no meloka.
Ny fiteny hoe teo ambonin’ny hazo dia ilazana ny hazofijaliana, izay niaretany ny fanamelohana tokony ho antsika, nandritra ireo ora telo maizina. Tsy ny fiainany lavorary tsy akory no afaka namonjy antsika, fa “Kristy maty noho ny fahotantsika” (1 Korintiana 15:3).
Nitondra ny fahotantsika Izy. Nitambesatra mafy taminy tokoa izany! Tena zava-doza taminy ny nandaozan’Ilay Andriamaniny Azy, noho ireo fahotantsika! Eo amin’izany asa lavorary izany no mifototra ny antoka ho an’ny famonjena antsika, ny fiadanana ho an’ny fieritreretantsika, ireo fampanantenana fitahiana avy amin’Ilay Andriamanitsika.